Tallaabooyinka indho-sarcaadka ah ee hanti-dhawraha…W/Q Cabdiraxmaan Jaamac | Kaafi News
Tallaabooyinka indho-sarcaadka ah ee hanti-dhawraha…W/Q Cabdiraxmaan Jaamac
Tallaabooyinka indho-sarcaadka ah ee hanti-dhawre ku sheeggu siddii bakaylaha haddba meel iskaga keen tusaayo waa mid laggu ceebaynaayo garraadka ummaddan,waxaanay sawir fiican inaga siinaysaa heerka uu gaadhsiisan yahay fahankeenna dawladnimo iyo shaqadda hanti-dhawraha loo igmaday.
waayo hanti-dhawre inta baddan waxa uu galaa xafiis marka horreba fari ku goddan tahay natiijadda baadhitaankiisunna waa mid sifiican loogu dhagg-taago,balse maaha xafiis hebel waa galnay oo ka tagganay oo xafiis hebel ayaannu haddana ka dul-dagganay,dawladaha sharciga iyo isla xisaabtanka dawladnimo sifiican ugu run
sheeggaa waa habaar hanti-dhawre ku gal innagana waa inaga ciyaar ciyaar.
Horta maxaynu hanti dhawre uga baahanahay sow dhamaanteen hanti-dhawrayaal qarran ma nihin oo masuul kasta oo xil inoo haya ama inoo hayn jiray ma naqaano wixii ku soo kordhay iyo wixii ka dhacayba muddadaa uu xilka inoo hayay,dee haa sow maaha,kuwo baddan oo aynu isla qirsanahay in ay xoolo badan lun-saddeen sow suuqyadda ma buuxaan oo waliba ma kala xigtaysanno,haa dhaha dee jaallayaal.
Haddii hanti-dhawruhu yidhaahdo masuul kaasi waxa uu lun-sadday hanti intaa leegg oo waxa uu ku eedaysan yahay xatooyo hanti qarran,sow nin reer hebel ah noqon maayo oo reer qansaxiisiinna halkan laabta inoo tummi maayaan oo ina odhan maayaan ma kaayagga ayaa tuug noqday reer hebel anagga ayay noo jeeddaan oo naggu xumaynayaan.
Inta ay dawladnimadeenna ka dhiman tahay isla xisaabtankunna waxa inaga dhimman tiir weyn oo la,aantii dawlanimaddeennu ay la laan-gadhayn doonto waligeedd.